आयरल्याण्डबाट सृजना लामाको कोरोना अनूभूति - Texas Nepal News - Texas Nepal News
कोरोनाले विश्वब्यापी महामारीको रुप लिइरहेको छ । विश्वका शक्तीशाली मुलुकहरु समेत कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाई लडीरहेका छन् । सबैभन्दा पहिला कोरोना भाइरस फैलिएको चीनले कोरोना विरुद्धको युद्धमा सफलता हात पारिसकेको छ । यद्यपी चुनौती अझै बाँकि छ । विश्वका शक्तीशाली मुलुकहरु जस्तै आयरल्याण्ड पनि कोरोना भाइरसबाट अछुतो रहन सकेको छैन । यहाँको सरकारले कोरोना भाइरस फैलीन नदिन र महामारीको रुप आउँन नदिनको लागि ठूलो पूर्व तयारी गरिरहेको छ । जनता आफै सचेत छन् ताकी कोरोना भाइरस के हो ? यो कसरी सर्छ र यसको उपचार विधी के हो ? भन्ने जस्ता कुरामा अधिकांश यहाँका जनताको चेतनास्तर माथि भएको कारण सबै जनाले कोरोना विरुद्धको लडाईमा विजयी हुनको लागि घरभित्रै बसेका छन् ।
सरकारले औपचारिक रुपमा केहि दिन अघि मात्र लकडाउन गरे पनि महिनौअघि देखि जनताहरु घरबाहिर निस्कीएका छैनन । म आफै पनि मार्च १२ तारिखदेखि घरभित्रै बसिरहेको छु । म जस्तै आयरल्याण्डमा बसोबास गर्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाई दिदी बहिनीहरु पनि घरभित्रै सुरक्षीत साथ बसिरहनु भएको छ । यहाँ करिव २ हजार नेपालीको बसोबास रहेको छ । अहिलेसम्म कोही पनि नेपाली कोरोना भाइरस संक्रमीत हुनु भएको छैन ।
यहाँ लकडाउनको कारण अत्यावश्यक कामको लागि घर बाहिर निस्कदा कम्तिमा दुई मिटरको दूरीमा रहेर निस्कन पाइने गरि सरकारले नियम बनाएको छ । जस्तो, कुनै सामान लिनको लागि जाँदा दुई मिटरको लाईमा बसेर किन्नुपर्छ भने घरको वरिपरि बस्दा कम्तिमा २ किंलोमिटरको आसपासमा मात्र बस्न पाइन्छ ।
कोरोनाको कारण प्रभावीत जनताको लागि यहाँको सरकारले धेरै राम्रो काम गरेको छ । यहाँको सरकार जनताप्रति यती इमानदार र जिम्मेवार छ कि आफना घरपरिवारका सदस्यलाई हामी जसरी माया गर्छौ त्यसरी नै जनताप्रतिको माया सरकारले दर्शाइरहेको देखिन्छ । आयरल्याण्ड सरकारले जनतालाई कुनै पनि चीजको अभाव हुन नदिन तथा जनतालाई समस्या पर्न नदिन राहत प्याकेजको रुपमा विभिन्न किसिमबाट सहयोग गरिरहेको छ । यहाँ लामो समयसम्म पनि घरभित्रै बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि जनता खानको लागि समस्यामा पदैनन जस्तो लाग्छ । किनकी जनताको लागि धेरै काम सरकारले गरेको छ जुन यहाँ बस्ने हरेक आयरल्याण्डबासीले महसुस गरिरहेका छन् ।
ब्यक्तीगत हिसावले आयरल्याण्डमा बसे पनि आफनो सबै मन भने आफनो मातृभूमी मै छ । आफनो घरपरिवार, आफन्त, इष्ट मित्रहरुसँग दैनीक फोन गरेर आफनो दैनीकी बिताउने गरेकी छु । जेहोस आयरल्याण्डमा बसोबास गर्ने नागरिकले यस्तो कठिन संकटको अवस्थामा त यती धेरै सुविधा सरकारबाट पाइरहेको देख्दा सोच्ने गर्छु, हाम्रो मुलुक पनि आयरल्याण्ड जस्तो कहिले बन्ने होला ?
नेपालमा पनि सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि भन्दै लकडाउन लगाएकोमा खुसी लागेको छ । किनकी कोरोना भाइरसको मुख्य औषधि भनेको नै घरभित्रै सुरक्षीत बस्ने हो । यो रोग फैलनुको मुख्य कारण घरबाहिर निस्केर विभिन्न ब्यक्तीहरुसँग घुलमिल हुँदा नै हो । त्यसैले विश्वभरि कोरोना महामारीको रुप लिइरहेको अवस्थामा कम्तीमा अत्यावश्यक कामबाहेक घरभित्रै बसेर कोरोना महामारीको रुपमा फैलन नदिनु तपाई हामी सबैको कर्तब्य हो । कोरोना आफैमा सर्दैन तर घरबाहिर गएर कोरोनालाई प्रवेश गर्न पनि दिनु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझनुपर्छ । किनकी हामी एक जना मात्र घरबाहिर निस्केर त्यो रोग ल्यायौ भने त्यसले घरपरिवार सबैलाई सार्छ । त्यसकारण तपाई एक जनाको गल्तीले घरपरिवारको अन्य सदस्यलाई पनि रोग सार्ने काम नगर्नुहोला । यो रोग लागीसकेपछि तपाई जतिसुकै आर्थिक सम्पन्नता भए पनि केहि हुनेछैन । त्यसैले सबैभन्दा ठूलो कुरा रोग लाग्न नदिनु र आवश्यक सावधानी अपनाउनु नै हो ।
लकडाउन लामो समयसम्म हुँदा घरभित्रै बस्न पट्यार पनि लाग्न सक्छ । तर ज्यान भन्दा ठूलो कुरा अरु केहि हुन सक्दैन भन्ने तपाईले बिर्सन हुँदैन । घरभित्रै बसेर पनि २४ सौ घन्टा सामाजीक सञ्जाल र समाचार हेर्न अनलाइनमा मात्र नबसी घरपरिवारका सदस्यहरुसँग हाँस्ने, रमाउने, हसाउने, मनोरञ्जन गर्ने, रचनात्मक काम गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ ताकी दिमागलाई फ्रेस बनाइ राख्न सकियोस । तर सधैभरि सामाजीक सञ्जालमा मात्र झुण्डीदाँ त्यसले मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ । अहिलेको विश्वभरिको मुख्य समाचार भनेकै कोरोना भाइरस भन्दा छैन । समाचार हेर्न थाल्यो यो देशमा यती संक्रमण यतीको मृत्यु भयो भन्ने भन्दा अरु छैन । त्यसैले दिनमा केहि समय सामाजीक सञ्जालमा रहने, केहि समय समाचार हेर्ने र अन्य सबै समय अन्यत्र नै लगाउनुस ताकी तपाईलाई घरभित्रै बस्नुपर्दा तनाव नहोस । सधैभरि नकारात्मक समाचार मात्र पढ्दा तपाईको मानसीक स्वास्थ्यमा असर पर्छ । तपाई अन्य रोगबाट पीडित भइरहनु भएको छ भने पनि तपाईको रोगसँग लड्ने क्षमतामा ह्रास आउँन सक्छ ।
लामो समय लकडाउन भइरहँदा श्रमगरि खाने मजदूर, गरिव तथा पीडित समुदायलाई छाक टार्न पनि अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्था छ । यो अवस्थामा सक्नेले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र एक छाक टार्न कठिन अवस्थामा रहेकालाई सहयोग गर्दै सबैले मानवीय भावनाले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । तपाईको सानो सहयोग पनि यो बेलामा ठूलो सहयोग हुन सक्छ । ब्यक्तीगत हिसावले म आयरल्याण्डमा रहे पनि काठमाडौंमा रहेको आफनो घर भाडामा बस्नेलाई एक महिनाको घर बहाल शुल्क नलिने निर्णय गरेकी छु । घरभाडामा बस्नु हुने सबैलाई एक महिनाको घरभाडा नलिने जानकारी गराउँदै यो बेलामा सान्त्वना दिने कार्य गरेको छु । तपाई हामी जहाँ बसे पनि सकेको सहयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैले यो बेला आफू पनि बाँच्दै अरुलाई पनि बचाउनु सबैभन्दा ठूलो हो ।
अन्तमा सबैमा के अनुरोध गर्न चाहान्छु भने यो संकटको बेलामा आफूले सकेको ठाउँबाट सक्ने र खान समेत नपाउने अवस्थामा रहेका पीडीतलाई सहयोग गर्दै कोरोना विरुद्धको यो युद्धमा विजयी हुन घरभित्रै बसौ, आवश्यक सावधानी अपनाऔं, आफू पनि बाँचौ र अरुलाई पनि बचाउन सहयोग गरौ । धन्यवाद ।
अमेरिकाबाट नेपाल आइपुग्यो जोन्सन एन्ड जोन्सनको १५ लाख डोज खोप
गण्डकी प्रदेशमा पनि काग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्दै, बहुमत दावीसहितको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइयो
आगामी रणनीतिका लागि तीन दलका शीर्ष नेताहरुबीच देउवा निवासमा छलफल